Filatroana Afghana Niteraka Adihevitra Mafana sy Fanantenana Ho An’ny Fiarahamonina Misokatra Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2016 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Español, 日本語, English
Sary avy amin'i Ryasat Ali. Nahazoan-dalana.
Tamin'ny herinandro lasa, nandrava ny fiainana lavareny isan'andro ao Kabul ny fitambarana tanora mpilatro Afghana, ary niteraka fankasitrahana, adihevitra sy fanamelohana amin'izany.
Nitafy ankajo nentim-paharazana ireo tovovavy Afghana tamin'ny lanonana filatroana tamin'ny herinandro lasa tao afovoan'ny renivohitra sady tanàna lehibe indrindra ao Afghanistana. Hevitra avy amin'ny tranon'ny lamaody LAMAN napetraka vao haingana, izay midika avy amin'ny teny Dari hoe “zipo” ny fampisehoana lamaody. Ahitana sokajy samihafa ny mpanatrika: Afghana sy vahiny.
Hevitra avy amin'ireo tanora Afghana telo nandrato fianarana Tandrefana ny tranon'ny lamaody LAMAN, vehivavy ny iray amin'izy ireo.
Tamin'ny 13 Desambra, andro vitsivitsy taorian'ny seho voalohany, nisy ny seho faharoa notontosaina – ‘Haft Barg-e Honar’ – miaraka amin'ireo mpankafy lamaody Hazara mitafy akanjo nentim-paharazana Hazaragi, natao peta-kofehy (amboradara) tamim-piangaliana fahaizana.
Ny tanjona dia ny hampiratiana ny asa tanana miaraka amin'ny zandriolona Hazara izay mandrakotra ny 9% ny mponina ao Afghanistan sy niaritra fanenjehana goavana teo ambany fifehezan’ ny Taliban sy ny governemanta hafa tao anatin'ny tantaran'ny firenena.
Maro no nidera ny herim-pon’ ireo Afghana mpilatro mitsangana ho an'ny fiarahamonina ara-drariny sy mitovy kokoa. Ny hafa kosa, na izany aza, nampiseho rikoriko manoloana azy ireo, mampiseho ny fomba fijerin'ny ankamaroan'ny Afghana izay mijanona mpandala ho tanteraka ny nentim-paharazana amin’ ny fijerin'izy ireo ny vehivavy sy ny ankizivavy.
Naneho ny heviny bebe kokoa tao amin'ny Facebook mihoatra noho ny Twitter ny vondrona tsy mpankato, mbola anisan'ny media sosialy safidin'ny mpiserasera aterineto Afghana liberaly marobe ny Facebook.
Ishaq Anis nisioka hoe:
Sambany ny olona sahy manomboka seho lamaody tahaka ity tao Kabul
Sami Baha, mpisera Facebook nilaza am-pahatezerana hoe:
Mampalahelo ahy ianareo. Mpivaro-tena ianareo. Voalohany, nampihatra ny hevitra Tandrefana ianareo, ary ankehitriny, manao toa azy ireo. Adinonareo tanteraka ny teny sarobidin’i Allah ao amin'ny Korany Masina. Hitahy ny fahotanareo anie Andriamanitra … “
Alameer Amiri, mpisera Facebook hafa naneho hevitra tahaka izany ihany koa:
Atao maritiora isan'andro ny Afghana, kanefa jerevo ireto mpivarotena ireto. Tsy Afghana izy ireo, fa Tandrefana.
Hatramin'ny nananganan'i Ahmad Shah Durani azy tamin'ny 1747, niaina vanim-potoana fohy vitsivitsy tamin'ny fanekena ny vehivavy handray andraikitra hita maso kokoa eo anivon'ny fiaraha-monina i Afghanistana ankehitriny, ary vanim-potoana lava amin'ny famoretana. Amin'ny ankapobeny, tsy afa-miala ao an-trano ny vehivavy. Marefo sy tsy maharitra ela ny ezaka amin'ny fanovana.
Notoherina tamin'ny fomba mamaivay tamin'ny endrika fikomiana antsoina hoe Mullah-e Lang, izay notohanan'ny tambajotra mpitondra fivavahana tanteraka ilay fikomiana, ny tetikasam-panavaozana lehibe nataon'i Amanullah Khan, izay lasa Emir tao amin'ny firenena tamin'ny taona 1919.
Nifanandrina tamin'ny firohotry ny jihad, te-hioripaka ao Kabul ihany koa, ny fanavaozana notontosaina nandritra ny Repoblika Demokratika (1978-92). Taorian'ny ny tsy fahombiazan'ny fananiham-bohitra Sovietika, nanokatra lalana ho any amin'ny firongatry ny hery mpandala ny nentim-paharazana vaovao (Taliban) tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ny tolona anatiny nataon'ny Mujahidin.
Nandràra izay karazana fisehoan'ny vehivavy imasom-bahoaka, mandràra ny mpanampy mpitsabo sy ny mpampivelona izay niatrika faneriterana maro ilay vondrona vaovao nifehy sy nijanona tao mandrapaharava azy noho ny fanafihan'ny ISAF notarihan'ny Etazonia. Lasa fomba fanao mahazatra ny tora-bato (fanasaziana).
Miaraka amin'ny Taliban izay mbola mihantsy ady amin'ny governemanta, nisara-bazana amin'ny lovany ny fiarahamonina. Taorian'ny vaovao mikasika ny filatroana, Javad Margir nanoratra tao amin'ny Facebook:
Ho ela velona ny Taliban
Namaly i Ramin Tanha hoe:
Rehefa resy ny Taliban, azo antoka fa handroso ny firenentsika
Hatramin'ny nahatongavan'ny governemanta vaovao teo amin'ny fitondrana, mihelina ny fiarovana ary miely patrana ny ady, raha nomena sehatra voafetra ho an'ny fisehoam-bahoaka ny vehivavy.
Mijanona anisan'ny rafitra ao amin'ny firenena ny sakantsakana taloha.
Tamin'ny volana Martsa, vehivavy marary saina iray antsoina hoe Farkhunda no voadaroky ny vahoaka romotra ary nandoro ny fatiny tao afovoan'i Kabul, zato metatra monja miala ny lapam-panjakana, rehefa nahazo vaovao diso ireo andian-jiolahy fa nandoro Koran izy.
Vao haingana kokoa, notoraham-bato i Rokhshana,19-taona taorian'ny fitsarana niampanga azy ho niezaka nandositra niaraka tamin'ny lehilahy tao amin'ny faritanin'i Ghor, izay iray amin'ireo vehivavy telo governora notendren'ny Filoha Ghani ny governora ao Ghor.
Tamin'ny 2013, nanomboka ny iray amin'ireo fampisehoana lamaody ao Kabul, voalohany sy goavana indrindra taorian'ny Taliban ao Afghanistana ny fikambanam-behivavy Afghana ho an'ny Fanovana. Tamin'izany fotoana izany, feno fitarainana avy amin'ny tambajotran'ny mpitondra fivavahana matanjaka indrindra ao amin'ny firenena ny hetsika.
Mpitondra fivavahana mafana fo iray nanoratra tao amin'ny bilaoginy fa naman'ny Tandrefana very voninahitra ireo mpikarakara fampisehoana tahaka izao. Nandrisika ny Miozolomana ihany koa izy mba tsy hangina eo anatrehan'ny zava-mitranga tahaka izany.
Na dia izany aza, nandroso izany.
Na dia an'ohatra fotsiny aza, afaka manampy mandrava tsikelikely ny fanjakazakan-dehilahy hitarin'ny herin'ny mpitondra fivavahana ireo hetsika ireo.
Na dia manjaka ao Afghanistana aza ny fiheverana fa mpikarakara tokantrano tanteraka ny vehivavy, miha-maro ireo tanora mino fa maro kokoa ny fiainam-bahoaka ho an'ny vehivavy fa tsy irery foana.
14 ora izayAzerbaijan